Warshadda Qoda, Kuwa Alaabada - Soo-saareyaasha Beeraleyda Shiinaha
Furrow Single Plow
Kani waa hal dhinac oo hal dhinac ah oo loogu talagay 8 ~ 20hp tractor lug, 12hp ~ 20hp mini tractor.
Beerta Dabka Beerta Warshadda Beerta Beerta
Beerta qashin-qubka ayaa gebi ahaanba lagu rakibay cagaf lugeynaya iyo cagaf cagaf, inta lagu gudajiro hawlgalku, waxay ku habboon tahay hawlgalka garoonka dhexdiisa oo leh cows, caws iyo jirridaha dalagyada ama dhir, iska caabbinta ciidda weyn iyo leh dhagxaan badan iyo bulukeeti, iwm. Way ku wanaagsan tahay goynta cawska iyo cawska oo waa laga joogsan karaa cawska, carrada ama dhagaxa, iwm Way fududahay in la qabsado oo xoog la yeesho.
Laba Qashin 4 4 Gawaarida yar ee Gawaarida Naafada ah
Beerashadu waa nooc ka mid ah qalab beereedka wax lagu beero. Waa qaniinyo gebi ahaanba la ruqseeyey, kaas oo ka kooban geed qaro weyn dhamaadkiisa, oo badiyaa lagu xidho koox xoolo ah ama gawaarida jiida oo jiida, sidoo kalena wata xoog aadanaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo baloogyada ciidda oo laga sameeyo jeexitaan beero.
Qaab dhismeedka iftiinka, hawlgal sahlan, hufnaan shaqo oo sarreysa
Beeraha lagu dabaqi karo
Dhirta, xoolaha, xayawaanka, beeraha
Shuruudaha bixinta: T / T, L / C, Kaarka amaahda